Myths Of Menstruation - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ရာသီဓမ်မတာနဲ့ပတျသတျပွီး သငျအပါအဝငျ လူအမြားစု ယုံကွညျထားကွတဲ့ အယူအဆလေးတှေ မှနျ/မမှနျ ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ…….
ဆေးပညာမှာတော့ ရာသီလာနတေုနျး ခေါငျးမလြှျောရဘူးလို့ မညှနျကွားထားပါဘူး။ ခေါငျးလြှျောခွငျးဟာ တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးလုပျငနျးစဉျတှထေဲကတဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ ရာသီလာနခြေိနျဖွဈဖွဈ၊ အခွားအခြိနျဖွဈဖွဈ လိုအပျတဲ့အခြိနျမှာ ခေါငျးလြှျောလို့ရပါတယျ။
ဒီအခကျြကိုလညျးပဲ ဆေးပညာအရ ကနျ့သတျထားတာမြိုးမရှိပါဘူး။ (တဈခုရှိတာကတော့ ရာသီလာနခြေိနျမှာ ရာသီသှေးနဲ့အတူ ကိုယျခန်ဓာထဲက သံဓာတျအခြို့ဆုံးရှုံးသှားပါတယျ။လကျဖကျမှာပါတဲ့ ဓာတျတဈမြိုးဟာ အစားအစာတှထေဲက သံဓာတျကိုခန်ဓာကိုယျတှငျးသို့ စုပျယူမှုကိုတားဆီးတာကွောငျ့….ရာသီလာနခြေိနျ လကျဖကျစားမိရငျ သံဓာတျအားနညျးမှုဖွဈပျေါမှာစိုးတာကွောငျ့ လူကွီးတှကေ မစားခိုငျးတာဖွဈနိုငျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ လကျဖကျကိုအလှနျအကြှံမဟုတျဘဲ အတနျအသငျ့စားရငျ ပွသနာမရှိနိုငျပါဘူး။)
(3)ရာသီလာနစေဉျ ခဈြတငျးနှောရငျ ကိုယျဝနျလုံးဝမရနိုငျဘူး။
ရာသီမလာခငျ ၇ရကျနဲ့ ရာသီစလာတဲ့ရကျကနစေနရေငျ ၇ရကျ (ရာသီလာရကျတှအေပါအဝငျ)….ထို ၁၄ရကျက ကိုယျဝနျရနိုငျခနြေညျးတဲ့ရကျတှဆေိုပမေယျ့ လုံးဝကိုယျဝနျမရနိုငျတာတော့မဟုတျပါဘူး။ကိုယျဝနျယူဖို့ အစီအစဉျမရှိသေးဘူးဆိုရငျတော့ စိတျခရြမယျ့ ကိုယျဝနျတားနညျးကို သုံးတာပိုသငျ့လြျောပါတယျ။
-ဒီအယူအဆဟာလညျးမမှနျကနျပါဘူး။ရာသီလာစဉျ ကိုယျလကျလှုပျရှားအားကစားလုပျခွငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျသှေးလညျပတျမှုကောငျးစလေို့ ရာသီမလာမီနဲ့ရာသီလာစဉျခံစားရတဲ့ နာကငျြကိုကျခဲမှုတှကေို သိသိသာသာသကျသာစပွေီး စိတျခံစားမှုပိုမိုကောငျးစပေါတယျ။
ရပါတယျ။ရာသီနစေဉျရကေူးမယျဆိုရငျ ပုံမှနျသုံးနကေအြမြိုးသမီးလစဉျသုံးပစ်စညျးထကျ tampon(ဂှမျးတောငျ့)ကိုအသုံးပွုရငျ ပိုအဆငျပွနေိုငျပါတယျ။Tampon မသုံးခငျြရငျလညျး အမြိုးသမီးလစဉျသုံးပစ်စညျးကို ပုံမှနျအတိုငျးအတှငျးကခံပွီး အပျေါကရကေူးဝတျစုံထပျဝတျပွီး ကူးလညျးရပါတယျ။
ရာသီဓမ္မတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သင်အပါအဝင် လူအများစု ယုံကြည်ထားကြတဲ့ အယူအဆလေးတွေ မှန်/မမှန် ကြည့်လိုက်ကြရအောင်…….
ဆေးပညာမှာတော့ ရာသီလာနေတုန်း ခေါင်းမလျှော်ရဘူးလို့ မညွှန်ကြားထားပါဘူး။ ခေါင်းလျှော်ခြင်းဟာ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် ရာသီလာနေချိန်ဖြစ်ဖြစ်၊ အခြားအချိန်ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းလျှော်လို့ရပါတယ်။
ဒီအချက်ကိုလည်းပဲ ဆေးပညာအရ ကန့်သတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူး။ (တစ်ခုရှိတာကတော့ ရာသီလာနေချိန်မှာ ရာသီသွေးနဲ့အတူ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက သံဓာတ်အချို့ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။လက်ဖက်မှာပါတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးဟာ အစားအစာတွေထဲက သံဓာတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့ စုပ်ယူမှုကိုတားဆီးတာကြောင့်….ရာသီလာနေချိန် လက်ဖက်စားမိရင် သံဓာတ်အားနည်းမှုဖြစ်ပေါ်မှာစိုးတာကြောင့် လူကြီးတွေက မစားခိုင်းတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် လက်ဖက်ကိုအလွန်အကျွံမဟုတ်ဘဲ အတန်အသင့်စားရင် ပြသနာမရှိနိုင်ပါဘူး။)
(3)ရာသီလာနေစဉ် ချစ်တင်းနှောရင် ကိုယ်ဝန်လုံးဝမရနိုင်ဘူး။
ရာသီမလာခင် ၇ရက်နဲ့ ရာသီစလာတဲ့ရက်ကနေစနေရင် ၇ရက် (ရာသီလာရက်တွေအပါအဝင်)….ထို ၁၄ရက်က ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေနည်းတဲ့ရက်တွေဆိုပေမယ့် လုံးဝကိုယ်ဝန်မရနိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ စိတ်ချရမယ့် ကိုယ်ဝန်တားနည်းကို သုံးတာပိုသင့်လျော်ပါတယ်။
-ဒီအယူအဆဟာလည်းမမှန်ကန်ပါဘူး။ရာသီလာစဉ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားလုပ်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေလို့ ရာသီမလာမီနဲ့ရာသီလာစဉ်ခံစားရတဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကို သိသိသာသာသက်သာစေပြီး စိတ်ခံစားမှုပိုမိုကောင်းစေပါတယ်။
ရပါတယ်။ရာသီနေစဉ်ရေကူးမယ်ဆိုရင် ပုံမှန်သုံးနေကျအမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းထက် tampon(ဂွမ်းတောင့်)ကိုအသုံးပြုရင် ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။Tampon မသုံးချင်ရင်လည်း အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်းကို ပုံမှန်အတိုင်းအတွင်းကခံပြီး အပေါ်ကရေကူးဝတ်စုံထပ်ဝတ်ပြီး ကူးလည်းရပါတယ်။